Breaking News: Barattoota Oromoo kanneen Yuniversity naannoo Tigiraayi keessatti baratan irratti tarkaanfiin reebichaa fi ajjeechaa fudhatamuu eegaleera. -
Muddee/December 09, 2017
Kaleessa galgala 8/12/2017 halkan keessaa barattoota Oromoo yuniversity Addagiraat baratan iratti tarkaanfii fudhatameen namni tokko du’e tokko kan suuraan isaa armaan gaditti maxxanfame kunis garmalee waan reebameef du’aa fi jiru gidduu jira
maqaan isaa Boruu_Hakilee_xunnii jedhama godina Booranaa aanaa muunyalee ganda Tuqii keessati nama dhalatedha
via: Murti Guuto
OromoRevolution Guyya arra Muddee 09, 2017 Lolli Bifa Haaraatiin Liyyuu Poolisiin Soomaalee Daangaa Oromiyaa Qaxxaamuruun Ilmaan Oromoo Irratti Bante Itti Fufeera! Godina Harargee Lixaa Aanaa Hawwi Guddina irraa lolli Hawwi Guddina Aradda Ibsaa kessatti akkuma itti fufetti jira. Guyyaa ha’raa, Muddee 09, 2017 Liyyuu hayliin NS ykn shiftooleen Abdi Illey irra ergamanii dhufanin ummata nagayarratti dhukaasa banuun lubbuun gotota Oromoo lama darbe jira. Isaanis:
1. Qeerroo arada Ibsaa tan ta’e Obbo Sabay She Sani fi,
2. Milishaa arrada Ta’o kan ta’e Obbo Jamal Hassano gocha suukkaneessaa irratti hojjachudhan lubbuu isaani baasani jiran.
Ummatni Oromo arradda Ibsa fi Qorke jiran mirga isanii kabachisani jirachaa turan. Garuu, erga Rayyaan ittisa biyyaa dhufee booda liyyuu haylin humna horatee hidhannoo guuttatani ummata nagayarratti dhukaasa banani akkasuma karaarratti bahuun makiinaa dha’uufi kkf rawwachaa jiran. Kun hundi kan tahu eegale erga makalaakayaan dhufte booda. Kun waan haalaan nama dinqisiisudha. Guyyaa har’aa awwalchi gootota kenyaa bifa kanaan raawatameera. Maati fi sahibban akkasumas ummata Oromo hundaaf jajjabina hawwinaaf. Isaanif immoo jannatul furdos hawwinaaf. OPDOn ajjeechaa daangaa kana akkuma amma duraatti gara dhoksuutti deebitee jirti. Ummanni keenya garuu falmaa isaa itti fufa, nutis dhugaa saaxiluu itti fufna!